Xoghayihii UDUB "Qaranimada iyo Quruxda Somaliland waa ahmiyadda Kowaad"
Xoghayihii UDUB “Qaranimada iyo Quruxda Somaliland waa ahmiyadda Kowaad”
Wasiir ku-xigeenkii hore ee Wasaarada Ganacsiga Somaliland Cabdixaliim Maxamed Muuse oo Qoraal soo gaadhsiiyey Gobanimonews, ayaa Bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan Qaranimada iyo midnimada dalka, nabad-gelyada iyo xasiloonidanna ka hor mariyaan dan kasta oo khaas ah.
Qoraalka Cabdixaliim oo dheeeraa waxa uu u dhignaa sidan:
“Waxaan bulshada reer Somaliland iyo ehelkoodiiba ka tacsiyadaynayaa dhalinyaradii dhaawaca iyo dhimashadu kasoo gaadhay shaqaaqadii ka dhacday magaalada Burco, waxaanan Allah uga baryayaa inuu wilka dhintayna u naxariisto kuwa dhaawaca ahna dhakhso u shaafiyo.
May ahayn maanta, manaynaan filayn inay cidi si fudud inoogaga dhaawacanto ama inooga dhimato.
Sidaynu la wada soconno dadka reer Somaliland si qurux badan oo niyad sami leh ayay codkooda u bixiyeen. Goobjoogayaashii caalamka kale inoogo yimi iyo warbaahinnadii ka soo qaybgalayna warbixin wanaagsan oo sumcad badan inoo soo jiidday ayay inaga bixiyeen, waxa kaliya ee la sugayayna waxay ahayd natiijo si turxaan la’ ku dhammaata oo musharixii guulaysta loo wada tahniyadeeyo.
Wixii dhacayba way dheceen ciddii dhibkaa masuulka ka ahaydna anigoon hadda farta ku fiiqayn, waxaan rajaynayaa inaanay dib u dhici doonin.
Waxaan halkan farriin kooban uga dirayaa saddex qolo:
Qolada kowaad waa Komishanka Doorashada oo aan marka hore ku hambalyaynayo inay aqbaleen oo wada hadal la fureen Xisbigii cabanayay. Waxaanan Komishanka ku adkeynaynaa inay ilaaliyaan caddaaladda oo shacbigii iyo xisbiyadii aamminay iyo dhaartii ay mareenba Allah uga cabsadaan, Xisbigii cabasho macquul ah oo nidaamka iyo xeerka waafaqsan la yimaaddana ay qanciyaan.
Qolada labaad waa musharixiinta Xisbiyada oo aan leeyahay shacabka reer Somaliland way idiin dadaaleen, codkii aad weydiisateena si sharaf leh ayay idiin siiyeen idinkama geyaan inaad wax qaranimadooda iyo nabadgelyadooda wax u dhimaya inaad ugu abaal guddaan. Musharixiintu wixii cabasho ah waa inay u maraan dariiqa sharciga ah. Musharixiintu waa inay ku talo galaan guul iyo guul-darradoba. Waa inay dib u milicsadaan doorashooyinkii hore waddanka uga soo dhacay iyo sidii milgaha lahayd ee loo aqbali jirey ama xilka la isugu wareejin jirey. Waxaanu idinka rajaynayaa inaad dalka ka baajisaan in wax dhibaato ah oo dambe sumcaddiisa, qaranimadiisa iyo geedi socodka dimoqraadiyadeed ee hano qaadday ay soo gaadho. Waxaanu idinka rajaynayaa inaad si gobonimo leh u wada hambalyaysaan Musharixiinta Ilaahay guusha siiyo marka natiijada lagu dhawaaqo.
Qolada saddexaad ee aan halkan farriinta uga dirayaa waa shacabka reer Somaliland. Shacabka gaar ahaan dhallinyarada waxaan leeyahay nabadgelyadiina ilaashada. Dib u xasuusta dhibaatada iyo halganka adag ee dalkan loo soo maray. Xisbiyadu cod bay idinku leeyihiin ee idinkuma laha inaad dhiigiina u shubtaan. Waxa la arki doontaan musharixiintaa aad kala raacaysaan iyagoo berri gacmaha ishaysta oo isu hambalyaynaya. Doorashadu xummad yar iyo xamaasad bay leedahay ha la is xakameeyo oo yaanay idinla fogaan. Hadalka xumi ma hadho maalinta la simbiririxdaana waa maantoo kale, durbana waan arkayaa dhallinyaro badan iyo weliba rag siyaasiyiin ah oo baraha bulshada ka caytamaya oo waxay doonaan ku hadlaya.
Qarannimada Somaliland iyo quruxdeedu ahmiyadda kowaad ha inoo noqoto “Somaliland First”.
Saddexdaa qolo ka dib ciidamada Boliska waxaan leeyahay shaqo badan baa haysaane masuuliyad ha lagu daro, yaan marnaba xabbad nool loo adeegsan shacabka masaakiinta.
Waxan kaloo jecelahay inaan ku daro inaan ciidamada military-ga loo adeegsan shacabka, runtiina saaxiibkay S/Gaas Nuux Taani oo hadlayay, soona wada shaqaynay, waxan u sheegi lahaa Inuu shaqada ciidanka military-ga dastuurku u cayimay dib u akhriyo gaar ahaan Qodobka 123 iya 124 aad.
Allah ha Guuleeyo Somaliland
Previous: Khilaafkii u dhexeeyey Guddida Doorashada iyo WADDANI oo la xaliyey
Next: Baaq ku socda ragga mujaahidiin iyo madaxdahdaqameedka Burco iyo Daallo ee isku magacaabay Garxajis.